जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण - Naya Patrika
काठमाडाैँ, २९ फागुन | फागुन २९, २०७४
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि सोमबार साँझ उनकै निवासमा गोली र खुकुरी प्रहार भएको छ । आक्रमणबाट चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् ।
चौधरी केही दिनदेखि चर्चामा थिए । उनीमाथि आफ्नै नगर क्षेत्रमा बोक्सी आरोपमा १८ वर्षीया किशोरी राधा चौधरीमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई उपेक्षा गरेको र पीडकलाई छुटाउन सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको थियो ।
सो घटनामा उनको संलग्नता र भूमिकाबारे छानबिन गर्न उनकै पार्टी एमालेबाट समेत छानबिन समिति गठन भइसकेको थियो ।
उनीमाथिको गोली प्रहार सोही घटनालाई लिएर भएको हो वा अरू नै कारणबाट भएको हो, त्यसको त सत्यतथ्य छानबिन हुने नै छ । तर, जुनसुकै मनसायबाट गरिएको भए पनि यो आक्रमण निन्दनीय छ । कुनै पनि सभ्य समाजमा यस प्रकारका आक्रमण आधारभूूत रूपमै अस्वीकार्य छन् ।
बोक्सी आरोपमा राधा चौधरीमाथिको कुटपिटका आरोपीलाई छुटाउन वा मिलापत्र गराउन मेयर ममताप्रसादको कुनै भूमिका वा संलग्नता भएकै अवस्थामा पनि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषी प्रमाणित भए उनीमाथि कारबाही गर्ने नियम, कानुन, निकाय र प्रक्रिया छन् ।
त्यसैले, सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयमा प्रश्न गर्नु र जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुको सट्टा आफैँ कारबाहीमा उत्रने घटना गम्भीर दुष्प्रयास हो ।
कुनै पनि सभ्य समाजमा यसरी कानुनलाई हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । समाजले आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्न सक्छ, तर प्रश्नको समानान्तर गोली, बारुद र खुकुरी चल्न सक्दैन ।
बोलीको विकल्प गोली होइन, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिनुपर्छ । मिडिया, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले प्रश्न गर्न सक्छ, तर प्रश्नको आवाज हिंसाले बलियो बनाउन सक्तैन ।
त्यो अपेक्षित र स्वीकार्य छैन, कसैले त्यस्तो बाटो खोज्छ भने निन्दा गरिनुपर्छ । साथसाथै, यस घटनाले राज्यको कमजोर सुरक्षा स्थितिमाथि पनि प्रश्न उठाइदिएको छ ।
समाजले आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्न सक्छ, तर प्रश्नको समानान्तर गोली, बारुद र खुकुरी चल्न सक्दैन । बोलीको विकल्प गोली होइन, त्यो अपेक्षित र स्वीकार्य छैन । कसैले त्यस्तो बाटो खोज्छ भने निन्दा गरिनुपर्छ
एउटा नगरपालिकाका मेयरजस्ता जनप्रतिनिधिमाथि घरमै घुसेर आक्रमणकारीले आक्रमण गर्न सक्छन् भने सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा कहाँ छ ?
के आफ्नै जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा समेत राज्यले अत्यावश्यक सतर्कता अपनाउन सक्दैन ? राज्यले नगर क्षेत्रमै रहेका मेयरको समेत सुरक्षा गर्न सक्दैन भने दूरदराजका ग्रामीण जनताले सुरक्षाको अपेक्षा कसरी गर्नु ? यो विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, रहनुपर्छ ।
नहुनु पर्ने घटना भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिला सरकारले गम्भीर अवस्थाका घाइते मेयर चौधरीको उपचारका लागि सम्भावित सम्पूर्ण विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
किनकि, जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यक्तिको जीवन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । त्यससँगै राज्यले यस घटनामा संलग्न व्यक्ति वा समूह जो भए पनि तिनलाई पक्राउ गरी कानुनको कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ ।
साथै, यस घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारी जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन पनि ढिलो गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिसँगै हरेक नागरिकको जीवन र प्रतिष्ठाको उत्तिकै मूल्य छ भन्नेमा पनि कहीँकतै शंका रहनु हुन्न ।